Ukuthengisa kumxholo akuThengisi KUNYE noMxholo | Martech Zone
NgoLwesithathu, Matshi 19, 2014 NgoLwesithathu, Matshi 19, 2014 Douglas Karr
Ukuthetha nenkampani evelisa umxholo omkhulu, baxoxe ukuba ezinye zeengcamango zomxholo eziye zaqhutywa kwiflagole zenqatshiwe kuba umxholo awuzange ngqo ifuthe kwintengiso Iimveliso zabo okanye iinkonzo. Ugh. Esi sisicwangciso somxholo esiyintlekele. Ukuba injongo yawo onke amaqhekeza omxholo wakho kukuthengisa into, unokuvala ibhlog yakho kwaye uthenge iintengiso.
Sukundenza impazamo- abanye abantu phaya bafuna imveliso okanye inkonzo eya kuthi ibancede balungise ingxaki kwaye ungcono ube nomxholo obaqhubela kwintengiso. Kodwa ukuba zonke iqhekeza lomxholo uzama ukuwaqhubela kwintengiso, awuboneleli ngexabiso kubaphulaphuli bakho.
Ndiza kunika imizekelo:
TinderBox Inkqubo yabo iwenza umsebenzi odinisayo wokubhala izindululo kunye nezivumelwano ezenzelwe wena nabaxhasi, ukuvumela amagqabantshintshi, ulayini obomvu kunye nesiginitsha yedijithali. Ukuba konke ababhale ngako yayizinto zabo zemihla ngemihla, akukho mntu wayeza kuza kwindawo yabo. Nangona kunjalo, babhala amanqaku anomdla abonelela ngexabiso kwiinkokeli zentengiso ezibuya zibuyelela ekufundeni umxholo wazo.
Mindjet -Iqonga labo livumela umbono, intsebenziswano, imephu yengqondo kunye nolawulo lomsebenzi. Indawo yabo ayichazi yonke imihla ukuba kulula kangakanani kwimveliso yabo ukwenza imephu yengqondo, yabo Yila ibhlog wabelana ngomxholo omangalisayo kwizinto ezintsha kunye nefuthe lawo kwindawo yokusebenza. Esinye sezixhobo eziphezulu zokucinga kunye nokuyila kwi-Intanethi.
Ekunene kwi-Interactive -Bathengisa isoftware yokuthengisa ... kodwa ibhlog yabo iyathetha kumjikelo wobomi wabathengi, umjikelo wokuthenga, ixabiso labathengi, ukugcinwa kwabathengi kunye neminye imiba emikhulu kwindawo. Ngelixa abo bakhuphisana nabo behlala bebabaza malunga nokukhokelela ngaphezulu kwi-faneli, i-Right On Interactive isebenzisa indlela eyahlukileyo-ichaza indlela yokufumana abathengi abaxabiseke ngakumbi kwaye baya kuba namandla okuhlala kunye nenkampani yakho ukukhulisa imbuyekezo kutyalo-mali.
Uluhlu lukaAngie -Ukubonelela ngovavanyo olunzulu lwababoneleli beenkonzo abathembekileyo ngenxa yokuba bengaziwa kwaye inkampani isebenza ukulamla kunye nokuqinisekisa amava eenkonzo ezisemgangathweni kubabhalisi babo. Kodwa indawo yabo ibonelela ngetoni yolwazi malunga namashishini, yenza ngokwakho ingcebiso kubantu, kunye neengcebiso eziqinileyo kubantu abaphanda eso sigqibo sokuthenga silandelayo. Abathengisi ukubhaliswa kunye nomxholo wabo, bandisa ukuthembela kubathengi kubo kwaye babonelele ngexabiso elingaphaya kovavanyo.
Njengoko umfundi efunda amanqaku, baqala ukwamkela ukuba inkampani iyayiqonda imiceli mngeni kunye nokudakumba kwabo. Ngomxholo, umfundi ufumana ixabiso elongezelelekileyo kwinkampani, wakha ukuthembela kwinkampani KUNYE, ekugqibeleni, amathuba okuba ngumthengi anyuswe kakhulu. Injongo yesininzi somxholo ayikukhawuleza thengisa umntu, kukubabonisa ubungcali bakho kwicandelo labo, ubabonise igunya lakho, ubunkokeli bakho, kunye nokubonelela ngexabiso elingaphezulu kokuthenga nje imveliso okanye inkonzo.
Xa ukufezekisa oku, umxholo wakho uyathengisa.
Ukwazisa: Iinkampani ezidweliswe apha ngasentla bonke abaxhasi bethu.
tags: ukuthengisa umxholoUkunika amandla ukuthengisa